TETIKASA “BAS MANGOKY” : “Paikady hanatrarana ny fahaleovan-tena ara-tsakafo”
Nitondra fanazavana mikasika ny tetikasa “Bas Mangoky” ireo Depiote eny Tsimbazaza, omaly. 7 février 2020
Navoitran’izy ireo tao anatin’izany fa ity tetikasa ity dia tsy fivarotana ny tanin’ny Malagasy velively, araka ny resa-be aelin’ny mpanohitra, fa tetikasa natao hanatratrarana ny velirano fahasivy, dia ny fahaleovan-tena ara-tsakafo izay efa napetraky ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina ho fanamby. Nanatitra ireo Depiote fa raha tanteraka io tetikasa io dia tsy hanafatra vary avy any ivelany intsony i Madagasikara fa mety ho isika indray aza no hanondrana.
Voarakitra ao anaty fifanarahana amin’ity tetikasa ity mantsy fa ny 80 isan-jaton’ny vokatra vokarina ao “Bas Mangoky” dia hovidian’ny fanjakana avokoa ary haparitaka eto amin’ny tsena anatiny. “Ny politika ankapoben’ny fanjakana dia namaritra fa misy velaran-tany 100 000ha hatsaraina sy hovolena ao anatin’ny 5 taona. Amin’izao fotoana izao dia efa mahita velaran-tany any amin’ny 105 000ha ny fitondram-panjakana any amin’iny faritr’i Menabe iny. Hanatrarana ny fahaleovan-tena ara-tsakafo ireo ary tsy ho an’ny firenan-kafa fa ho antsika ihany. Tsy fivarotana tanin-drazana velively izany fa paikady hanatrarana ny fahaleovan-tena ara-tsakafo. Aoka hazava, tsy misy tany amidy na iray dia aza fa fiaraha-miasa no natao” hoy ny fanazavan’ireo Depiote.
Tsy hisy fanilihana olona amin’ny taniny…
Fantatra nandritra ny tafa tamin’ny mpanao gazety nataon’ny Depiote io omaly io koa fa tsy hisy fanilihana olona amin’ny taniny ny fanatanterahana ity tetikasa ity. Hitsinjara ho 60 ha maromaro mantsy ny velaran-tany ao “Bas Mangoky” ary raha toa ka misy tanàna na fananan’olona tafiditra izany dia tsy azon’ny orinsa “Elite Agro” izay nahazo ny tolotra esorina na simbaina. “Nidina tany ifotony izahay Depiote nijery ny fanataterahana ity tetikasa ity. Nanao fanadihadiana ihany koa izahay ary nahita fa mandeha araka ny tokony ho izy ny fanajana ireo pitsopitsony rehetra takian’ny lalàna. Tsy misy fanalana olona amin’ny taniny any, tsy misy fandravana fananan’olona. Ny orinasa nahazo ny tolotra rahateo tsy mbola am-perinasa tanteraka amin’izao fotoana izao fa vao manomboka miditra tsikelikely amin’ny tetikasa”, hoy ny fanzavan’ny Depioten’i Lucien Rakotomalala, Depiote voafidy tao Toliara faharoa.
Nahazoana tso-drano avy amin’ny olobe
Nanamafy koa ireo Depiote fa nisy ny fierana tamin’ireo mponina any an-toerana tamin’ny fanatanterahana ity tetikasa ity ary nahazoana tso-drano avy amin’ny Raiamandreny ara-drazana avokoa izany rehetra izany. “Nanatona ny vahoaka izahay satria nandeha ny resaka fa misy tsy manaiky ny mponina any an-toerana. Tsy marina izany. Izahay izao no nitafa tamin’ny mponina mivantana ary hita nandritra izany fa mangetaheta fandrosoana ny vahoaka any amin’ireo faritra ireo. Efa tsy andrin’izy ireo aza ny hametrahana izany fahaleovan-tena ara-tsakafo izany”, hoy hatrany ny fanazavan’ireo Depiote.
Nodisoin’izy ireo koa ny filazana fa misy mpandraharaha malagasy iray mahazo ampahan-tany ao amin’io faritra io. “Tsara raha mba manao fanadihadiana ireo mpiteniteny foana ireo. Diso ny filazana fa misy olona omena ampahan-tany ao amin’io toerana io. Afaka manampy sy miara-miasa amin’ny “Elite Agro” izay te hiara-hiasa aminy fa hatreto aloha tsy misy olona manokana nomena tombony izany amin’io tetikasa io” hoy ny Depiote Siteny Randrianasoloniako.